Dhamma Video - Browse Media - Bamaw
B - Bamaw Sayardaw - ဗန်းမော်ဆရာတော်ဘုရားကြီး - Most Recent
Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] / B - Bamaw Sayardaw - ဗန်းမော်ဆရာတော်ဘုရားကြီး မဟာသတိပဋ္ဌာ...
မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ္တန် - ဗန်းမော်ဆရာတော်ဘုရားကြီး
Tags: မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ္တန် - ဗန်းမော်ဆရာတော်ဘုရားကြီး maha thadi pa htar na thoat tan bamaw sayardaw sayartaw Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] / B - Bamaw Sayardaw - ဗန်းမော်ဆရာတော်ဘုရားကြီး အရဟံ ဇယံ...
(ဘုရားဂုဏ်တော် ၁၃ ပါး)
( ဝါးချက် မင်းကျောင်းဆရာတော် နှင့်...
Tags: အရဟံ ဇယံ ဂါထာတော်ကြီး ဗန်းမော်ဆရာတော် အရဟံဇယံ ဂါထာ ဘုရားဂုဏ်တော် ဂုဏ်တော် ayahan ahyahanaya han ah ya han bamawsayardaw bamaw sayardaw buddha gontaw garhtar gar htar Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] / B - Bamaw Sayardaw - ဗန်းမော်ဆရာတော်ဘုရားကြီး “နိဗ္ဗာန်တ...
Tags: “နိဗ္ဗာန်တံခါးဖွင့်တရားတော်” - ဗန်းမော်ဆရာတော် , Bamaw Syardaw , NateBan , Nate Ban Door Open , NateBanTaGarPhwint , BaMawSayardaw Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] / B - Bamaw Sayardaw - ဗန်းမော်ဆရာတော်ဘုရားကြီး သမ္ဗုဒ္ဓေသ...
င်္အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ အော်ရီဂွန်ာ၏ပြည်နယ်၊ ပေါ့တလန်မြို့၊ သိရီမင်္ဂလာကျောင်းမှာ 2011-ခု၊ ဇူလိုင်လ ၅-ရက်၊...
Tags: သမ္ဗုဒ္ဓေသမိုင်းတရားတော် (ဗန်းမော်ဆရာတော်) Bamaw Portalnd Ashinsirinda , Bamaw Sayardaw , Than Boat Day History , Than Boat Day Tha Mine , BaMawSayardaw , ဗန်းမော်ဆရာတော် Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] / B - Bamaw Sayardaw - ဗန်းမော်ဆရာတော်ဘုရားကြီး ဗန်းမော်ဆ...
သီတဂူဓမ္မ၀ိဟာရ Maplewood Minnesota
ဓမ္မဒါန - U Aung Koe
Tags: ဗန်းမော်ဆရာတော်ကြီး သီတဂူဓမ္မ၀ိဟာရ Maplewood Minnesota bamawsayartaw bamaw sayardaw Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] / B - Bamaw Sayardaw - ဗန်းမော်ဆရာတော်ဘုရားကြီး Bamaw Sayardaw - Seattle, WA
Bamaw Sayardaw - Seattle, WA
Tags: Bamaw Sayardaw Seattle WA ဗန်းမော်ဆရာတော် ဗန်းမော် Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] / B - Bamaw Sayardaw - ဗန်းမော်ဆရာတော်ဘုရားကြီး Bamaw Sayardaw Dhamma Talk...
Bamaw Sayardaw Dhamma Talk ( Colorado )
Tags: Bamaw Sayardaw Dhamma Talk ( Colorado ) ဗန်းမော်ဆရာတော် ဗန်းမော် Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] / B - Bamaw Sayardaw - ဗန်းမော်ဆရာတော်ဘုရားကြီး Bamaw Sayardaw Dhamma Talk...
How to close the hell
Bamaw Sayardaw Dhamma Talk at Chicago
Tags: Bamaw Sayardaw ဗန်းမော်ဆရာတော် ဗန်းမော် hell ngaye nga ye how to close the hell Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] / B - Bamaw Sayardaw - ဗန်းမော်ဆရာတော်ဘုရားကြီး အပါယ်တံခါ...
ကျေးဇူးတော်ရှင် (နဝမ)ဗန်းမော်ဆရာတော်ဘုရားကြီး ဟောကြားတော်မူသော အပါယ်တံခါးပိတ်တရားတော် Bamaw Sayardaw Closing the hell at Florida
Tags: ကျေးဇူးတော်ရှင် (နဝမ) ဗန်းမော်ဆရာတော်ဘုရားကြီး , Bamaw Sayardaw , Bamawsayardaw , bamaw , ဗန်းမော်ဆရာတော် , ဗန်းမော် ,apal ta gar pate , Apaltagarpate , close the hell door, hell , closing the hell , florida Pages: 1 of 1